काठमाडौ । ०६२ मा एकल एल्बम मोक्ष सहित सांगीत क्षेत्रमा भित्रीएका शिब परियार ०७१ सम्म आइपुग्दा चर्चीत गायकको रुपमा चिनीन सफल छन् । यो एकदशकको अन्तरालमा उनले फेवातालमा साहिली , काहाथियौ तिमी , क्या दामी भो , दिलचोरेर ,पागल बनायौ ,बाटो मोडेर ,सून्छु तिमीले, रित्तो रित्तो छु म लागयत दजनौ सफल गीत दिएका छन् । गजल ,आधुनीक तथा चलचित्रको गीतमा आवज भरेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सफल यी गायकको पछिल्लो समय स्वदेश तथा बिदेशका स्टेज कार्यक्रममा पनि उतिकै ब्यस्त छन् । बोलाबेलामा आयोजना हुने सांगीतिक अवार्ड समारोहमा समेत अवार्ड हात पार्न सफल यी गायक शिब परियार सँग बिकास लामिछाने ले गर्नु भयको छोटो कुराकानी ।
१ अहिले कतिको ब्यस्तता बढेको छ ?
अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्ष अझै ब्यस्तता बढेको छ । यो बर्ष चलचीत्र बिन्दास २ को सुन्छु तिमीले मलाई गीत हिट भएपछी त झन् मलाई स्टेज प्रोगाम समाली नसक्नु आए ।
२ संगीतमा कसरी छिर्नु भयो ?
संगीतमा लाग्नु त सानैदेखीको रहर हो । त्यसमाथी मेरो पहीलो गीतनै फेवातालमा साहिली ।।।।हिट भएपछी यो फिल्डमा अगाडी बढ्न सजिलो भयो ।
३ आफूलाई एउटा गायकको रुपमा चिनाउन संघर्ष त थुप्रै गर्नुभयो होला ?
हो । घरबाट काठमाडौंमा आएर गायकको पहिचान बनाउन धेरै चुनौती पार गरे । आफ्नो घरपरिवार छोडेर एउटा विरानो ठाँउमा आएर संघर्ष गर्नु आफैमा अप्ठ्यारो थियो । संघर्ष र चुनौतीमा रमाउन सके त्यसै भित्र सफलता हुदोरहेछ ।)ःन्)डद्दज्ञठ अयउथ
४ यस क्षेत्रमा लाग्न घरपरिवारको साथ कतिका छ ?
कुनै पनि ब्याती अगाडि बढ्नको लागि घरपरिवारको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । मेरो कला प्रतीको रुचिमा मेरो परिवारले साथ सहयोग र हौसला दिएकै कारण यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको छु । यसमा साथीहरुको पनी धेरै हात छ ।
५ अहिलेसम्म कति गीतमा स्वर भर्नु भयो ?
अहिलेसम्म आफ्नो १० ओटा एल्बम निकाली सकेको छु । यस्तै मैले अहिलेसम्म ३०० भन्दा बढी गीतमा स्वर भरेको छु ।
६ कस्ता खालका गीत गाउन मनपर्छ ?
मलाई सबै किसिमका गीत गाउन मनपर्छ । तर मलाई बडी सिरीयस गीत गाउन रुचाउछु । अहिले आधुनिक,लोकपप, पप र चलचित्रको गीतहरु गाइरहेको छु ।
५ गायकको रुपमा चिनिदाको अनुभव ?
निकै खुसी लाग्दो रहेछ । दर्शक श्रोताहरुले गायक भनेर सम्बोदन गर्दा अझ जिम्बेवारी थपिएको महसुस हुने रहेछ ।
८ यो क्षेत्रमा बाच्न गाहो छ भन्छन नी ?
हो , सांगीतिक बजार घट्दो क्रममा छ । तर पनि राम्रो गीत निकाल्न सक्यो भने श्रोताले मनपराउनु हुन्छ । यो क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो गीत पस्कन सक्यो भने राम्रो आम्दानी हुन्छ
९ तपाईको बिचारमा संगीतको परीभाषा ?
हरेक मानिसको बिचारमा संगीतको परिभाष फरकफरक हुनसक्छ । बुझाई आ आफ्नै हुन्छ । मेरो बिचारमा स्वर र लयको समिश्रण ने संगीत हो ।
१० जीवन के हो जस्तो लाग्छ ?
जिवन एउटा संघर्षसील यात्रा हो ।
११ कुन संगीतकारको गीत गाउन आनन्द लाग्छ ?
सबै संगीतकार आआफ्ना ठाउमा राम्रा छन् । तर पछील्लो समय उदाएका संगीतकार अर्जुन पोखरेलले संगीत दिएका गीत आनन्द आउछ ।
१२ सांगीतिक क्षेत्रबाट पलाएन हुन मन लागेन ?
लागेन, किनभने म सधै यसैमा लाग्छु भनेर आएको । यसलाई छोडेर टाढा रहन सक्दीन ।
१३ आफ्नो प्रतिसप्रर्धि कसलाई ठान्नु भएको छ ?
म आफैलाई ठान्छु । किनभने एक गीत हिट भएपछि अर्को गित पनि त्यो भन्दा राम्रो दिनुपर्ने चुनौति मेरो सामुन्ने आउछ ।
१४ अन्त्यमा केहि भन्नु छ की ?
म अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न तपाई श्रोताहरुको महत्वपुर्ण भुमिका छ । मलाई माया,हौसला र प्रतिक्रिया दिने सबैलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।